Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 15)
Elephone A6 Mini ayaa ka muuqda fiidiyowga qaabkiisana si buuxda ayaa loo muujiyaa
Naqshadda taleefanka Elephone A6 Mini ayaa lagu soo duubay fiidiyow cusub oo la soo geliyay. Dhameystirkeeda fudud, yar-yar iyo xarrago leh ayaa si fiican loogu qaddarin karaa.
Xiaomi, LG, Alcatel iyo Oppo waxay yareeyeen hirgalinta Chips-ka NFC ee taleefannadooda
Dhowr shirkadood oo ka soo jeeda Aasiya ayaa diiday fulinta tikniyoolajiyadda NFC ee taleefannadooda sababo kala duwan awgood. Baro iyaga!
Samsung waxay soo saari kartaa Galaxy A bil kasta
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha Samsung ee ah inay soo saaraan Galaxy A ka duwan bil kasta, sida xogta qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah.
Madaxweyne kuxigeenka Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa inay jiri doonaan Redmi oo leh Snapdragon 855
Madaxweyne ku xigeenka Xiaomi ayaa xaqiijiyay inuu jiri doono taleefan casri ah oo loo yaqaan Redmi oo leh Snapdragon 855. Tani waxay imaan doontaa bartamaha sanadka iyadoo qiimo jaban ku imaan doonta.
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition waa taleefanka ugu awoodda badan adduunka
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa Taleefoonka xiaomi Mi 9 ee ugu weyn bisha Febraayo 20. Sannadkii hore, shirkadda ayaa ku dhawaaqday taleefanka ...
Sony Xperia L3: Noocyada, Noocyada iyo Jawaab bixiyaasha xaday ee Mid-Range Next
Sony ayaa lagu wadaa inay ku soo bandhigto dhowr taleefannada casriga ah kulanka soo socda ee Mobile World Congress (MWC) 2019, ee ka dhici doona magaalada Barcelona. Horey dhowr ...
Oppo R19 ma imaaneyso sanadkan, sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka shirkadda
Intii lagu gudajiray warar xan iyo xogo la sheegay oo ka mid ah Oppo R19, oo la sheegay inuu yahay markabka soo socda ...
Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019): Shaashad weyn iyo qiimo jaban
Raadi wax badan oo ku saabsan qeexitaanka, qiimaha iyo bilaabida Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019), kiniinka cusub ee sumadda.
Telefoonnadii ugu horreeyay ee cusbooneysiin doona MIUI 11 ayaa la xaqiijiyay
Raadi wax badan oo ku saabsan liiska taleefannada gacanta ee Xiaomi iyo Redmi kuwaas oo marin u heli doona MIUI 11 qeybta labaad ee sanadkan.
Galaxy Note 8 wuxuu bilaabaa inuu cusbooneysiiyo Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' oo hadda deggan xasaradda Galaxy Note 8 ee waddamada Yurub qaarkood.
Xaqiijiyay naqshadeynta, qiimaha iyo astaamaha Xiaomi Mi 9
Xiaomi waxay xaqiijisay astaamaha Xiaomi Mi 9, marka lagu daro naqshadeeda iyo qiimaha xarumaha cusub ee shirkadda Aasiya.
Kuwani waxay noqon doonaan qalabyada la imaan doona Samsung Galaxy S10
Dhamaan qalabka Samsung Galaxy S10 ee aan arki doono inta lagu gudajiro soo bandhigida aaladda waa la sifeeyey, oo muujineysa laba waxyaalood oo xiro xiise leh.
Galaxy Tab S5e: Kiniiniga cusub ee Samsung
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Galaxy Tab S5e, kiniinka cusub ee Samsung ee horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
Galaxy S9 waxay heshaa balastar amni Febraayo
Cusboonaysiinta amniga ee bisha Febraayo ee Samsung Galaxy S9 ayaa hadda laga heli karaa Yurub iyada oo loo marayo OTA
Rasmi, Xiaomi wuxuu ku dhawaaqay soo bandhigida Mi 9 ee 24/02
24-ka Febraayo, ayaa mar kale lagu muujiyey jadwalka taariikhda, Xiaomi ayaa soo bandhigi doonta Mi 9-ka cusub, iyadoo lala wadaagi doono sumcadda shirkadaha kale ee muhiimka ah.
Samsung Galaxy M20 ayaa dhawaan iman kara Yurub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka Samsung ee Galaxy M20 ee Yurub oo dhici doona wax yar uun ka dib wararkan soo gaadhay.
Mamnuucida 5G: Shirkadda Huawei waxay ku daabacdaa degelkeeda websaydh Q&A ah si ay kalsoonida ugu soo noqoto
Shirkadda isgaarsiinta ee weyn ee Huawei ayaa sii wadaysa inay ku dadaasho inay dib u hanato kalsoonida taageerayaasheeda iyo macaamiisheeda shabakadda 5G.
Lenovo waxay abuurtay sumadeeda cusub ee Lemeng Mobile taasoo si rasmi ah loo shaaciyey isla markaana soo saari doonta taleefano warbaahin badan leh, wax badan ka ogow.
Energizer Power Max P18K Pop: Taleefanka casriga ah oo wata batari dhan 18.000 Mah
Energizer Power Max P18K Ku muuji taleefanka casriga ah oo leh batteri ah 18.000 Mah Mah oo horey loogu soo bandhigay Ameerika horay.
Rasmi: LG G8 ThinQ wuxuu lahaan doonaa bandhig Crystal Sound OLED oo wata aaladaha casriga
LG wuxuu soo saari doonaa taleefankiisa casriga ah ee soo socda, LG G8 ThinQ, inta lagu gudajiro Shirweynaha Caalamiga ee Wareegga (MWC 2019) dhamaadka ...
Tani waxay noqon laheyd taleefanka casriga ee isku laaban iQOO, nooca cusub ee Vivo
Daad ka soo baxa Shiinaha ayaa wadaagay noocyo taleefan iQOO isku laaban oo qarsoon. Tani waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee shirkadda ku dhasha hoosta Vivo.
Kiniin dhexdhexaad ah oo ka socda Samsung ayaa maraya Geekbench
Samsung waxay ka shaqeyneysaa kiniin cusub oo dhexdhexaad ah kaas oo hadda soo maray Geekbench waxaanan ku tusaynaa qeexitaannada
Shaandheeyey qeexitaanka iyo qiimaha Sony Xperia 10 iyo 10 Plus [+ Renders]
Sony Xperia XA3 iyo XA3 Ultra looma yeeri doono taa. Taabadalkeed, waxaa loogu yeeri doonaa Xperia 10 iyo 10 Plus. Sifooyinkeeda, qiimayaashiisa iyo waxa cusub ee la soo daabacay ayaa la helay.
Maxaan ka rajeyneynaa Xiaomi ee MWC 2019?
MWC waxay ku dhowdahay geeska oo Xiaomi waxay noqon kartaa mid ka mid ah halyeeyada waa weyn haddii ay go'aansato inay soo bandhigto qaar ka mid ah alaabteeda aadka loo filayo.
Bixinta ugu horreysa ee Xiaomi Mi 9 Explorer Edition: waxay la imaan doontaa afar kamaradood oo gadaal ah!
Bixiyaha ugu horreeya ee Xiaomi Mi 9 Explorer Edition ayaa ka soo muuqday internetka. Naqshadeynta gadaal waxay muujineysaa inay tahay mid hufan oo lagu qalabeeyay afar dareemayaal kamarad ah.
Samsung waxay sii wadaa cusbooneysiinta Galaxy S6 iyo S6 Edge 4 sano kadib
Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge ayaa helay casriyeyn cusub oo dhanka amniga ah, in kastoo xilligan kaliya lagu daydo Iibinta Imaaraadka
OUKITEL C15 Pro: Taleefanka casriga ah ee cusub oo wata darajo qaab dhibic biyo ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan OUKITEL C15 Pro, taleefanka casriga ah ee cusub oo leh dhibic biyood leh sumadda Shiinaha, horeyba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay.
Boostada cusub ee Oppo F11 Pro waxay muujineysaa dareenka 48 MP ee ay xambaarsan tahay
Oppo ayaa kaliya la wadaagay boor tijaabo ah oo loogu talagalay Oppo R11 Pro oo muddo dheer la sugayay Twitter. Teaser, maxaa ...
Xiaomi waa boqorka soosaarayaasha kuwaas oo taleefoonnadii ugu badnaa geeyay Hindiya sannadka 2018
Xiaomi horumarka weyn ee ay ka sameysay suuqa casriga ah ee taleefannada casriga ee Hindiya ayaa mar kale bartanka u ...
Xiaomi Mi 9 waxaa la soo bandhigi doonaa Febraayo 20: Waxa aan ka ogaanno taleefanka
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda Xiaomi Mi 9 la soo bandhigi doono sida lagu sheegay warbaahinta kala duwan iyo joogitaanka astaanta MWC 2019.
Awoodda batteriga ee Samsung Galaxy A50 ayaa la xaqiijiyay ka dib caddeynta taleefanka
Samsung Galaxy A50 ayaa ka mid ah taleefannada casriga ah ee A taxane ah ee Samsung ay soo saari doonto sanadkan. A…
Bixis cusub oo LG G8 ThinQ ah ayaa soo if baxday. Midkani wuxuu muujinayaa dhammaan xaglaha taleefanka waxaana shaaca ka qaaday Evan Blass.
Motorola P40 wuxuu noqonayaa taleefankii ugu horreeyay ee ay shirkaddu la timaado shaashad daloolsan. Markaa, waxaad heli doontaa Exynos 9610 SoC.
Sawirada dhabta ah ee Xiaomi Mi 9 ayaa si toos ah u sii daayay: faahfaahin kale ayaa sidoo kale la muujiyay
Sawirada cusub ee tooska ah ee Xiaomi Mi 9 ayaa soo ifbaxay waxayna kuwani na tusayaan labada dhinac ee taleefanka oo ay weheliyaan qeexitaanno muhiim ah.
Sawirradii ugu horreeyay ee Galaxy Watch Active interface iyo Galaxy Buds cusub ayaa la sifeeyey
Iyadoo maalmo kooban ay ka harsantahay soo bandhigida Galaxy Watch Active iyo Galaxy Buds, sawirada isdhexgalka iyo nashqadeynta ayaa la helay.
Redmi Note 7 waxay iibisaa hal milyan oo hal bil gudaheed
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iibka ay Redmi Note 7 ku haysatay wax ka yar bil iibka Shiinaha halkaas oo ay durba guul u tahay astaanta.
OnePlus 6 iyo 6T waxay helayaan cusboonaysiin amni oo cusub
Cusbooneysiin cusub ayaa u socota OnePlus 6 iyo OnePlus 6T. Cusbooneysiinta ayaa u keenta baakadka amniga ee Janaayo labada qalab.
ZTE Axon 10 Pro waxaa caddeeyay hay'adda ECC: bilaabashadeedu way dhowdahay oo way dhowdahay
Naanaysta 'Axon 10 Pro' ayaa hadda lagu xaqiijiyay liiskeeda Komishanka Dhaqaalaha ee Eurasia (EEC), halkaas oo hadda la caddeeyay.
Ku daatay gacanta video-ka ee Sony Xperia XA3: saamiga shaashadda sare ayaa mar kale la xaqiijiyay
Dhawr maalmood ka hor, sawirro toos ah oo soo socda ee Sony Xperia XA3 ayaa ka muuqday khadka tooska ah. In kasta oo ...
Beta-kii afaraad ee Android Pie ee Samsung Galaxy Note 8 hadda waa la heli karaa
Samsung ayaa hadda sii deysay beta-kii afaraad oo u dhigma Android Pie oo loogu talagalay Galaxy Note 8, toddobaad ka dib markii uu bilaabay kii saddexaad.
Shirkada Android waxay soo bandhigeysaa dhowr waxyaalood oo muhiim ah Nokia 9 Pureview
Tilmaamaha farsamo ee muhiimka ah ee Nokia 9 Pureview ayaa lagu faafiyey websaydhka Android Enterprise. Waxaa jira faahfaahin badan oo la xaqiijiyay.
Xiaomi Mi 9 ayaa u dhow oo u dhow: hadda waxay ka muuqatay TENAA
Xiaomi Mi 9 ayaa lagu sii daayay wakaalada shahaadada iyo ansixinta ee TENAA. Intaa waxaa dheer, waxaa la muujiyay in aaladda la soo saari karo bishan.
Bog furaha Samsung ayaa la soo dejiyey bilyan jeer
Browser-ka Samsung wuxuu hadda gaaray hal bilyan oo laga soo dejinayo barnaamijka loo yaqaan 'Play Store', waana tiro aan caadi aheyn oo tixgelinaysa inaysan ahayn barnaamij Google ku dhashay
Donald Trump inuu saxiixo amarka fulinta ee ka mamnuucaya wadayaasha inay adeegsadaan qalabka shabakada Shiinaha
Waxay umuuqataa in Huawei ay hada wajihi doonto diidmo qayaxan oo ka timid Mareykanka. Adeegsiga qalabka shabakadda Shiinaha waa la mamnuuci lahaa.
Sony Xperia XZ4 wuxuu marayaa Geekbench natiijooyinkiisana waa in lala yaabo
Shirkadda soo socota ee Sony Xperia XZ4 ayaa booqasho ku tagtay bartilmaameedka Geekbench oo waxay soo duubtay natiijooyin cajiib ah.
Samsung Galaxy S10 + oo leh 1TB kaydinta ayaa hadhow iman kara
Raadi wax badan oo ku saabsan dib u dhaca suurtagalka ah ee soo saarista noockan Samsung Galaxy S10 + oo leh 1 TB oo keyd ah oo gudaha ah.
Nubia sidoo kale waxay ku soo bandhigi doontaa qalab isku laaban MWC 2019
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan soo bandhigida Nubia ee MWC 2019 halkaas oo ay si rasmi ah ugu soo bandhigi doonaan qalab isku laaban.
Huawei wuxuu ku korayaa Shiinaha halka Apple ay yareyneyso shixnadaha
Shixnadda Apple ee iPhone-ka ayaa hoos u dhici lahayd 20% Shiinaha, oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn adduunka. Huawei ayaa ka faa'iideysata oo ku guuleysata dhulka.
Bixiyeyaasha maxaa noqon doona mobilada isku laabma Xiaomi
Koox ayaa mas'uul ka ahayd soo bandhigida fiidiyowga ay soo bandhigtay Xiaomi si ay noo siiso fikrad wanaagsan oo ku saabsan waxa uu taleefanka gacmeedku noqonayo.
Meizu Note 9 wuxuu imaan doonaa Febraayo 14 [Warqad rasmi ah]
Meizu Note 9 wuxuu imaan lahaa Febraayo 14, maalinta la xuso saaxiibtinimada iyo jacaylka. Tani waxaa shaaca ka qaaday boodh cusub oo rasmi ah.
Fiidiyowga 2019 Moto RAZR oo bixiyana xaday: faahfaahinta iyo naqshadeynta ayaa la muujiyay
Taleefanka casriga ee laalaaban ee Motorola, oo ku socda magaca "Moto RAZR 2019", ayaa lagu sii daayay iyada oo loo marayo turjumaadyo kala duwan iyo muuqaal fikradeed.
Pixel 3A wuxuu ka muuqanayaa Geekbench wuxuuna muujinayaa qaar ka mid ah qeexitaankiisa
Terminal, loogu magac daray "Pixel 3A", ayaa lagu sii daayay bartilmaameedka Geekbench. Tani waa suurtogal Google Pixel 3 Lite.
Huawei P30 Pro wuxuu leeyahay nooc 5G ah, laakiin waxaa kaliya lagu iibin doonaa Yurub
Huwei wuxuu Yurub ka bilaabi doonaa 5G nooca P30 Pro, sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee soo shaac baxay. Baro faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan.
Moto G4 Plus ayaa ugu dambeyntii helaya Android Oreo: waxay ka bilaabatay Mareykanka
Moto G4 Plus wuxuu durbaba helayaa cusbooneysiinta Android Oreo, maadaama ay sugeysay waqti dheer.
BlackBerry KEY2 inuu ku soo bandhigo midab cusub Yurub
Waxbadan ka ogow casriyeynta noocani cusub ee BlackBerry KEY2 oo ka dhici doona Yurub waqti yar kadib.
Waxaa lagu daadiyay fiidiyowga naqshadeynta Motorola RAZR laabma
Ka ogow wax badan oo ku saabsan naqshadeynta ay soo cusbooneysiisay isku-laabashada Motorola RAZR ay lahaan laheyd fiidiyowgan fikradda ah ee kuu oggolaanaya inaad aragto sida uu u shaqeeyo.
Kala soo bax waraaqda cusub ee Samsung Galaxy S10 ee soo socota
Haddii aad rabto inaad ku raaxeysato gidaarka hore ee Galaxy S10 ee horeyba loo heli jiray, halkan waa sida loo soo dejiyo.
Realme ayaa furi doonta dukaankeedii ugu horreeyay ee jireed sannadkan
Maamulaha guud ee Realme wuxuu shaaca ka qaaday inay qorsheynayaan "inay dukaamo gaar ah ka furaan Hindiya halkaas oo iibsadayaasha ay ka heli karaan khibrad taas ka duwan.
Thailand waxay tijaabisaa teknolojiyadda 5G ee Huawei inkasta oo laga shakisan yahay
Xulufada ugu da'da weyn Ameerika ee Aasiya, Thailand, waxay la midowday Huawei sariirta tijaabada 5G ee teknolojiyadda.
Lagu shaandheeyey qiimaha LG G8 ThinQ oo leh 128 GB oo ah xusuusta gudaha
Kahor intaan la soo saarin LG G8 ThinQ, qiimaheeda Kanadiyaanka ah waa la dusiyay. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka, waxay noqon doontaa mid qaali ah.
Qoraalka xaday ee OPPO F11 Pro
Raadi wax badan oo ku saabsan boodhadhka koowaad ee OPPO F11 Pro, taleefanka casriga ee cusub, iyo sidoo kale xogta ugu horreysa ee kamaradaha.
Kuwani waa midabada Samsung Galaxy S10 oo la iibin doono
Soo ogow midabada Samsung Galaxy S10 lagu bilaabi doono dukaamada iyada oo ay ugu wacan tahay daadad cusub oo yimid saacadihii la soo dhaafay.
Sawirada tooska ah ee Sony Xperia XA3 ayaa soo muuqda dhowr arrimood oo muhiim ahna waa faahfaahsan yihiin
Bogagga tiknoolajiyadda Jabbaan ayaa wadaagay sawirro dhab ah oo ka tirsan Sony Xperia XA3 si ay u muujiyaan nashqadeyntiisa iyo muuqaalkeeda oo buuxa Soo ogow!
Boostada rasmiga ah ee loo yaqaan 'Oppo R19' waxay muujineysaa inay ku imaaneyso dareemayaal 48 MP ah
Oppo R19 wuxuu ka mid noqon doonaa taleefannada casriga ah ee soo socda shirkadda Shiinaha. Qalabkani wuxuu la imaan doonaa dareeraha MP 48, sida ku cad boodhka rasmiga ah.
Ka dusay sawirro cusub oo Nokia 9 Pureview ah oo gacan-ka-hadal ah
Nokia 9 PureView waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee sida weyn loo sugayo in ay rasmi uga noqdaan Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ...
Samsung Galaxy M30 ayaa xaday muraayadaha: 6.38 ″ FHD + guddi iyo in badan la kashifay
Tilmaamaha farsamada iyo astaamaha ugu waaweyn ee Samsung Galaxy M30 ayaa mar kale la dusay; markan, oo leh faahfaahin dheeraad ah.
Vivo V15 Pro wuxuu ka muuqdaa fiidiyoow gacmeed muuqaalkiisana waa la kashifay
Vivo V15 Pro waxaa la soo bandhigi doonaa Febraayo 20 iyada oo loo marayo dhacdo ka dhacday New Delhi, India. Ka hor taas, fiidiyowgeeda ayaa la sii daayay.
Shaandheeyey qeexitaanka iyo naqshadda hore ee LG K12 +
Naqshadaynta LG K12 + ayaa lagu daadiyay iyada oo la bixinayo, sidoo kale astaamaha farsamo ee muhiimka ah.
LG G8 ThinQ wuxuu lahaan doonaa kamarad hore ToF iyo aqoonsi wajiga 3D ah
LG waxay xaqiijisay in markabkeeda soo socda, ee G8 ThinQ, uu qalabeyn doono aaladda 3D ToF sensor ee sawir-qaadista. Faahfaahin dheeraad ah hoos.
Huawei waxay ku bixisaa shaybaarka amniga internetka ee Poland si looga gudbo mamnuuca 5G
Huawei waxay dooneysaa inay ka sameysato Poland xarun amniga internetka ka dib markii ay dhibaatooyin u gudbisay dowladda, si looga qaado xayiraadda 5G.
Xiaomi waxay ku dhawaaqday in qaabka Muuqaalka Habeenkii ee Xiaomi Mi Mix 3 u imaan doono Mi 8 Lite, nooca ugu yar ee taxanaha Mi 8.
ZTE wuxuu u furayaa diiwaangelinta isticmaaleyaasha Axon 9 Pro ee doonaya inay helaan qalabka Pie beta
ZTE wuxuu bilaabay diiwaangelinta barnaamijka 'Pie beta beta' ee loogu talagalay dadka isticmaala Axon 9 Pro ee Shiinaha oo sidoo kale keena MiFavor 9.
Aasaasiga ah PH-2 wuxuu lahaan karaa kamarad hore oo ku taal dhabarka
Taleefanka Muhiimka ah, oo sifiican looga hadlay laakiin aan sifiican u sameyn dhanka iibka, ayaa lagu soo waramayaa inuu ...
Samsung waxay soo bandhigtay beta seddexaad ee Android Pie oo loogu talagalay Galaxy Note 8
Beta-kii saddexaad ee loo yaqaan 'Android Pie' ee loo yaqaan 'Samsung Galaxy Note 8' ayaa hadda loo heli karaa dhammaan dadka isticmaala ee qayb ka ah barnaamijka beta.
Shaashadda 21: 9 ee qalabayn doonta Sony Xperia XZ4 waxaa loogu yeeri doonaa CinemaWide
Sony waxay wici doontaa Xperia XZ21's 9: 4 ratio ratio waxay muujineysaa "CinemaWide" bandhig, sida dhowaan la ogaaday.
Moto G7 Play iyo Moto G7 Power: waa labada shirkadood ee cusub ee raqiiska ah
Raadi wax badan oo ku saabsan bartamaha-dhexe ee Motorola, oo leh Moto G7 Power iyo Moto G7 Play oo qeexitaankiisa, qiimahiisa iyo soosaaridiisuba ay rasmi yihiin.
Moto G7 iyo Moto G7 Plus: Motorola waxay cusbooneysiineysaa heerkeeda dhexe
Soo ogow qeexitaanka, qiimaha iyo taariikhda la siidaayo ee Moto G7 iyo Moto G7 Plus ee Motorola horeyba u si rasmi ah u soo bandhigtay.
Sony Xperia XA3 waxaa lagu sifeeyaa shaashadda CinemaWide iyo in ka badan [Renders]
Sony Xperia XA3 waa la soo daadiyey oo waxa la muujiyey ayaa muujinaya qaabkeeda iyo shaashadeeda. Qeybta dambe waxay noqon doontaa CinemaWide oo leh saamiga 21: 9.
Samsung Galaxy M waxaa lagu iibiyaa 3 daqiiqo oo kaliya
Raadi wax badan oo ku saabsan guusha Samsung Galaxy M markay ka bilaabatay Hindiya halkaas oo ay ku iibisay kaliya seddex daqiiqo Amazon.
Samsung waxay shatiyadeeda S Pen ku leedahay kamarad
Raadi wax badan oo ku saabsan patent-ka Samsung kaas oo aan ka helno S Pen oo leh kamarad isku dhafan gudaha oo imaan karta sannadkan.
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda Huawei P30 si rasmi ah loo soo bandhigi doono iyada oo loo eegayo daadad cusub oo horey u yimid.
Ma ogtahay waxa ku-dallaca lacag-la'aantu?
Wax walba waxay muujinayaan in Samsung Galaxy S10 uu lahaan doono lacag celin wireless ah, taas oo macnaheedu yahay iyada oo aan ku qaadan karno casriga kale
Noocyada 'Moto Z4 Play' ayaa xaday: 48 MP sensor, SD675 iyo wax badan oo la soo bandhigay
Qoraal Hindi ah ayaa la wadaagay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qeexitaanka Moto Z4 Play, iyadoo laga soo xigtay ilo lagu kalsoon yahay oo qarsoodi ah.
Haa, LG wuxuu kusii socon doonaa qaybtiisa mobilada inkasta oo khasaaro badan uu soo maray
Madaxa shirkadda elektaroniga ee LG Qiao Yujin ayaa sheegay in shirkaddu aysan ka tegi doonin qeybteeda mobilada waqti dhow.
Soo ogow noocyada Android ay hadda ka shaqeynayaan taleefan la laaban karo oo la sii deyn doono sannadkan.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefannada ay Energizer ku soo bandhigeyso MWC 2019, wadar ahaan 26, oo sideed ka mid ah horeyba aan u naqaannay.
Waa Febraayo oo Google ay bilawday inay soo saarto casriyeyntii ugu dambeysay ee amniga Android ee taleefannadooda ...
Taxanaha wuxuu noqon doonaa jawaabta Samsung ee Xiaomi
Samsung ma rabto inay u ogolaato dhamaadka-hoose inay noqoto wax Xiaomi ah, waxayna durbaba diyaarinaysaa seddex terminal oo loogu talagalay taxanaha A ee Galaxy. Goor dhaw war.
Samsung Galaxy S10 waa la keydin karaa laga bilaabo Febraayo 21
Samsung Galaxy S10e, S10 iyo S10 + waa la keydin karaa 24 saac kadib taariikhda rasmiga ah ee la soo bandhigayo, 21-ka Febraayo.
Sony Xperia XZ4 wuxuu ku daatay TENAA, sida muuqata: qeexitaankiisa ayaa shaaca laga qaaday
Bog teknolojiyadeed oo laga leeyahay dalka Jabbaan ayaa wadaagay shaashadaha shaashadda ee TENAA ee la sheegay in lagu tuhmayo in ay ka mid yihiin taleefannada casriga ah ee Xperia XZ4
Shirkadda Huawei ayaa xaday teknolojiyadda loo yaqaan 'Akhan Diamond crystal technology', sida tuhunku jiro
Waxay umuuqataa in Huawei ay wajaheyso dhibaatooyin cusub. Munaasabaddan, waxaa lagu eedeeyay inay ku xaday hanti aqooneed farsamada muraayadda iska caabinta.
10-ka Telefoon ee ugu awooda badan Janaayo 2019, Sida laga soo xigtay AnTuTu
AnTuTu waxay noo keenaysaa qiimeynta 10ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Janaayo 2019. Waan ku tusinaynaa!
Sawirka ugu horreeya ee Galaxy Sport waa la sifeeyaa, iyada oo aan lahayn bezel iyo muraayad qalooca
Ka dib dhowr bilood oo xan ah, sawirkii ugu horreeyay ee sida smartwatch-ka soo socda ee shirkadda Kuuriya ay noqon doonto ayaa ugu dambeyn la shaaciyay: Galaxy Sport
Telefoonada casriga ah ee ugu wanaagsan ee la bixiyo Maalinta Jacaylka
Baro xulashadan casriga ugu fiican dhammaan noocyada ku yaal Android si aad u siiso Maalinta Jacaylka. Ka hel hadiyadda ugu fiican noocyadan.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ayaa dhawaan adduunka ka bilaabi doona
In ka badan lix bilood ka dib markii la bilaabay, Xiaomi waxay ugu dambeyntii bilaabi kartaa Mi 8 Explorer Edition meel ka baxsan Shiinaha, sida ku cad helitaan cusub.
ASUS Beta Power: barnaamijka saxiixa ee keenaya Pie beta beta-ka ZenFone Max Pro M2
Asus waxay soo bandhigtay Barnaamijka Isticmaalaha Beta Power ee loogu talagalay dadka isticmaala Zenfone Max Pro M2 si ay u socodsiiyaan nooca beta ee Android Pie.
La sifeeyey nooca loo maleynayo ee Xiaomi Mi 9: miyuu leeyahay akhristaha faraha ee dhabarka?
Waxaa soo ifbaxay daadad cusub oo ah Xiaomi Mi 9 Tani waxay ku saabsantahay noocooda, kaasoo la imanaya akhristaha sawirka faraha oo ku yaal dhabarka.
Motorola Moto G7 wuxuu umuuqdaa inuu kudaatay TENAA oo ay weheliso qeexitaankiisa
Telefoon cusub oo Motorola ah oo nambarkiisu yahay 'XT1965-6' ayaa ka soo muuqday TENAA. Waxay noqon laheyd nooca Shiinaha ee Moto G7 ama G7 Plus.
Samsung Galaxy A90 wuxuu tarjumayaa: kamarad soo-bax ah iyo faahfaahin dheeraad ah ayaa la soo saaray
Vivo NEX wuxuu ahaa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee lagu soo bandhigo kamarad sawir qaade ah. Toddobaadyo gudahood, waxaan ku noolahay ...
Meizu Xusuusin 9: wax walba oo ku saabsan terminaalka mudnaanta xiga ee guriga Shiinaha
Meizu Note 9 waxaa la helay dhowr saacadood ka hor oo leh qeexitaanno xaddidan oo ku saabsan TENAA iyadoo loo marayo lambarka nambarka 'M923Q'….
Samsung Galaxy Note 9 waxay heleysaa Janaayo Android Pie Security patch
Jaangooyada amniga ee bisha Janaayo ee Samsung Galaxy Note 9 oo leh Android Pie ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo.
Galaxy A90 wuxuu la imaan lahaa kamarad lagalaaban karo
Raadi wax badan oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee Samsung, Galaxy A90, oo soo bandhigi doona sannadkan waxayna ku imaan doontaa kamarad hore oo laga noqon karo.
Redmi wuxuu ku shaqeeyaa taleefanka casriga ee Snapdragon 855
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka Redmi ee hadda ka shaqeynaya qaabkeedii ugu horreeyay ee dhammaadka leh kaas oo ku lahaan lahaa Snapdragon 855 gudaha.
Samsung Flow ayaa hadda aad uga dhakhso badan ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay
Codsiga Samsung Flow mar dambe nama oggolaanayo inaan si dhakhso leh ugu xirno qalabkeenna iyada oo ay ugu wacan tahay isku xirka Wi-Fi
Beta-saddexaad ee loo yaqaan 'Android Pie' ee loogu talagalay Galaxy S8 iyo S8 + waxaa ku jira qaybta amniga bisha Febraayo
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa soo saartay beta-kii saddexaad ee Android Pie, beta oo ay weheliso balastarka amniga ee Febraayo 2019.
OPPO waxay xaqiijineysaa soo galitaankeeda suuqyo cusub oo Yurub ah
Wax badan ka ogow qorshooyinka OPPO ee ah inay suuqyada cusub ka galaan Yurub bilahaan, sida ay xaqiijisay shirkadda lafteeda.
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa batariyaal la qaadan karo oo leh fiilo wireless ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan batariga cusub ee la qaadan karo ee ay Xiaomi soo bandhigtay kaas oo la imanaya iyada oo lagu soo dallacayo wireless-ka oo lagu daray oo lagu iibiyay Shiinaha.
Rasmi: Maamuus si aad u bilawdo taleefankeedii 5G ee ugu horreeyay qeybta labaad ee sanadka
Madaxweynaha sharafta leh George Zhao ayaa xaqiijiyay in shirkaddu ay soo saarayso taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G qeybtii labaad ee sanadka.
Fiidiyowga xayeysiinta ee taleefanka casriga ah ee isku laaban Samsung ayaa xaday
Samsung Vietnam waxay soo bandhigtay fiidiyoow yar oo loogu talagalay dhacdada soo socota ee shirkadda soo socota ee YouTube. Fiidiyowga waxaa lagu soo bandhigay taleefanka gacanta ee Samsung.
Noocyada 3D ee taleefanka casriga ah ee isku laabma ee 5G ee Huawei ayaa la sii daayay. Kuwani waxaa dhiirrigelin kara shatiyada diiwaangashan.
Hal nooc, oo looga shakisan yahay inuu yahay Realme 2 Pro, ayaa lagu arkay keydka barnaamijka 'GeekBench benchmark app' oo wata 'Android Pie'.
Vivo V15 Pro wuxuu la imaan doonaa kamarad seddexleey ah iyo shucuur pop-up ah
Vivo waxay dhawaan casuumaad u dirtay soosaaris badeecad bishii Febraayo 20 ee Hindiya, halkaas oo la filayo in shirkaddu soo bandhigto V15 Pro.